Kedu otu esi agbanwe ngwa ngwa akpa uzuzu maka onye na-anakọta uzuzu?
site ha na 20-02-23
N'ozuzu, akpa uzuzu nke ihe mkpofu uzuzu ji nke nta nke nta na-eyi, isi ihe kpatara ejiji akpa ahụ bụ ike egweri nke uzuzu. Na mgbakwunye, enwerekwa ihe kpatara mmebi nke ihe nzacha na nsị nke ihe kemịkalụ nke nnukwu t ...
You ma ihe onye na-akwado mmebi ahụ bụ?
site ha na 20-01-30
Kedu ihe bụ onye na-akwado mgbochi? Anticorrosive fan bụ ụdị onye ofufe pụrụ iche, dị ka onye na - akwado mgbawa, bụ nke a na - ejikarị n'oge pụrụ iche. Akụkụ ndị bụ isi nke onye na-akwado mgbochi corrosion bụ Fans nke ejiri ọgwụ mgbochi ma ọ bụ ihe mmebi emebi ma nwee ike iguzogide nrụrụ. ...
Ọrụ carbon adsorption igbe ọrụ nchekwa gburugburu ebe obibi-Luran gburugburu ebe obibi
site ha na 19-11-28
Nkọwa nke akụrụngwa ọgwụgwọ gas nke arụ ọrụ carbon adsorption igbe Green green arụ ọrụ carbon adsorption igbe arụ ọrụ carbon adsorption igbe, bụ organic n'efu gas filtration adsorption gburugburu ebe obibi ngwaahịa ngwaahịa, arụ ọrụ carbon adsorption igbe nwere ike nke igwe anaghị st ...
Ọrụ carbon adsorption igbe ọrụ nchebe gburugburu ebe obibi
site ha na 19-10-30
Ngwongwo na-ekpo ọkụ na-emepụta ihe nke Hangzhou lvran na-echebe gburugburu ebe obibi bụ nke mejupụtara carbon adsorption ịta ahụhụ, akụrụngwa combustion na ngwaọrụ eletriki. Ezubere ihe eji ere ahia oku dika isi ihe ...
Ebumnuche na azịza maka ntụgharị nke usoro ofufe mmebi ahụ
site ha na 19-09-20
Mgbanwe ntụgharị nke onye na-egbochi corrosion ga-eme ka mgbanwe nke gas butere, nke ga-emetụta arụmọrụ nke onye ofufe. Kedu ihe kpatara ya na otu esi edozi ya? Ebumnuche na azịza maka ọdịiche nke ọnụọgụ na-egbochi mgbochi corrosion: 1. Ihe kpatara ntụgharị nke usoro r ...
Ogologo oge ole ka a ga-eji dochie akpa uzuzu mgbe ejiri ya
site ha na 19-08-09
Akpa ájá bụ obi nke akpa nyo, akpa nyo bụ isi akụkụ na usoro nke ọrụ, ájá bag eji ogologo oge dochie bụ nchegbu nke enterprise, n'ihi na ugboro ole nke ájá akpa iji dochie mbubreyo ọrụ na-eri, n'okpuru, mana nyocha gburugburu ebe obibi na-acha akwụkwọ ndụ n'okpuru ọrụ dị iche iche ...
Mgbe mmezi na mmezi ihe ọmụma nke akpa nyo
site ha na 19-07-28
Uwe akpa nyo bụ akọrọ ájá mkpoko, nke kwesịrị ekwesị maka obon ọma, akọrọ na-abụghị fibrous ájá. Myọcha akpa eji akwa nyo ákwà ma ọ bụ ndị na-abụghị akwa ute, na-eji akwa nyo mmetụta nke ájá nzacha, gas mgbe uzuzu uzuzu gas n'ime akpa ájá catcher, nnukwu ahụ, isi ájá, n'ihi ...
Radial Agụba Centrifugal Fan, Centrifugal duct Fan, Single Inlet Centrifugal Fan, Nnukwu nrụgide Centrifugal Fan, Iyuzucha Fan, Anu ulo Scrubber,